သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားလေးလိမ်းခြယ်ပြီး ချစ်စဖွယ် အမူအရာမျိုးစုံလေး နဲ့ မြင်ရသူတိုင်း ရဲ့ ရင်ကိုအေးချမ်းစေခဲ့ တဲ့ ဖြူဖြူထွေး – Let Pan Daily
သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားလေးလိမ်းခြယ်ပြီး ချစ်စဖွယ် အမူအရာမျိုးစုံလေး နဲ့ မြင်ရသူတိုင်း ရဲ့ ရင်ကိုအေးချမ်းစေခဲ့ တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
မင်းသမီးချောလေးဖြူဖြူထွေး ကတော့ အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ တစ် ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင် ခဲ့ပါ တ ယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေပြီး ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့ကာ ပြည်သူချစ်အ နုပညာရှင် တစ်ယောက် ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
မြန်မာဆန်ဆန်ဖက်ရှင်လေးတွေကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ ထက်တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ သူမ ကတော့ ရယ် မောစရာကောင်းတဲ့ TIKTOKလေးတွေကို ဆော့ကစားလေ့ရှိပြီး အဆိုပါဗီဒီယိုလေးတွေဟာ ကြည့်ရူသူတွေ များပြားလျက်ရှိပါတယ်။ အပြုံးချိုချိုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမကတော့ ပရိ သတ်တွေ ရဲ့ ရင်ထဲမှာနေရာတစ်ခုကို ရယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမကတော့ ယခုမှာ သနပ်ခါးပါး ကွက်ကြားလေးလိမ်းခြယ်ပြီး ချစ်စဖွယ်အမူအရာမျိုးစုံလေးနဲ့ မြင်ရသူတိုင်းရဲ့ ရင်ကို အေးချမ်းစေခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ ” ပါးပြင်မှာ သနပ်ခါးလေး နဲ့. “ဆိုပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မင်းသမီးချောလေးဖြူဖြူထွေး ရဲ့ ချစ်စရာကောင်း လွ န်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေး လိုက်ရပါတယ်။
source : phyu phyi htwe ‘ s facebook acc
သနပျခါး ပါးကှကျကွားလေးလိမျးခွယျပွီး ခဈြစဖှယျ အမူအရာမြိုးစုံလေး နဲ့ မွငျရသူတိုငျး ရဲ့ ရငျကိုအေးခမျြးစခေဲ့ တဲ့ ဖွူဖွူထှေး
မငျးသမီးခြောလေးဖွူဖွူထှေး ကတော့ အောငျမွငျလကျြ ရှိနတေဲ့အနုပညာရှငျတှထေဲမှာ တဈ ယောကျအပါအဝငျဖွဈပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျ အားပေးမှုကို အခိုငျအမာရယူထားနိုငျ ခဲ့ပါ တ ယျ။ အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျလကျြရှိနပွေီး ကွျောငွာတှကေို ရိုကျကူးလကျြရှိနခေဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ အနုပညာလောကမှာ နရောတဈခုကို အခိုငျအမာရယူထားနိုငျခဲ့ကာ ပွညျသူခဈြအ နုပညာရှငျ တဈယောကျ ဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။
မွနျမာဆနျဆနျဖကျရှငျလေးတှကေို ဝတျဆငျလရှေိ့တဲ့ သူမကတော့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာ ထကျတငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ သူမ ကတော့ ရယျ မောစရာကောငျးတဲ့ TIKTOKလေးတှကေို ဆော့ကစားလရှေိ့ပွီး အဆိုပါဗီဒီယိုလေးတှဟော ကွညျ့ရူသူတှေ မြားပွားလကျြရှိပါတယျ။ အပွုံးခြိုခြိုလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ သူမကတော့ ပရိ သတျတှေ ရဲ့ ရငျထဲမှာနရောတဈခုကို ရယူထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
သူမကတော့ ယခုမှာ သနပျခါးပါး ကှကျကွားလေးလိမျးခွယျပွီး ခဈြစဖှယျအမူအရာမြိုးစုံလေးနဲ့ မွငျရသူတိုငျးရဲ့ ရငျကို အေးခမျြးစခေဲ့ပါတယျ။ သူမကတော့ ” ပါးပွငျမှာ သနပျခါးလေး နဲ့. “ဆိုပွီး ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာထကျမှာ ရေးသားထားခဲ့ တာပဲဖွဈပါတယျ။ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ မငျးသမီးခြောလေးဖွူဖွူထှေး ရဲ့ ခဈြစရာကောငျး လှ နျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေိုပွနျလညျဖျောပွပေး လိုကျရပါတယျ။
သူမရဲ့ ခဈြသူ နဲ့ နောကျဆုံး အဆကျသှယျရတဲ့ မှတျတမျး တဈခုကို ထုတျပွ လာတဲ့ ပိုငျတံခှနျ ကောငျမလေး
ဘဝရဲ့အလိုအပျဆုံး အရာတှထေဲ အိမျထောငျရေးမပါဘူး ဆိုတဲ့ ခငျသဇငျ
မိမိုကျလှနျး တဲ့ ဖကျရှငျလေး နဲ့ မောငျတို့ ရဲ့ မောငျ ဆိုတဲ့ စာသားလေး နဲ့ ပုံလေးတှေ တငျပေးလိုကျတဲ့ နနျး